Ifulethi elinamakamelo okulala amabili langasese eduze ne-Letchworth Park - I-Airbnb
Ifulethi elinamakamelo okulala amabili langasese eduze ne-Letchworth Park
Mount Morris, New York, i-United States
Ifulethi elihle elinamakamelo okulala amabili phezulu e-Mount Morris 's historic district! Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nangaphandle kwendawo yokupaka esemgwaqweni. Imizuzu nje engu- ukusuka e-Letchworth State Park nemizuzu engu-10 ukusuka e-SUNY Geneseo. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Genesee Valley Greenway Trail nasezitolo zethu ezinhle ze-Main Street nezindawo zokudlela. Uzoyithanda indawo ejabulisayo yale ndlu enomlando.
Indlu yethu yakhiwa ngo-1837 futhi ingenye yamakhaya amadala kunawo wonke e-Mount Morris! Kuphawulwe kubhaliso lombuso njengoba kwakuyikhaya lika-Mary Seymour Howell, isishoshovu sabesifazane nozakwaSusan B. Anthony. Ehlelwe kuma-acre amabili amakhulu anenqwaba yendawo eluhlaza nobuhle, uzothanda indawo enokuthula enkabeni yedolobhana.
Eduze nekhaya lethu kunamafulethi amabili avulekile, aphansi ahlalwa ngumqashi futhi ifulethi eliphansi liyatholakala njenge-Airbnb yezivakashi ezizolala noma abahambi besikhathi esifushane.
Ifulethi lakho linendawo yalo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nendawo yokupaka etholakalayo. Inefenisha ephelele futhi isanda kulungiswa ngekhishi eliphelele negumbi lokugezela elingu-4. Ikamelo lokulala elilodwa linombhede omkhulu kanti elinye ikamelo lokulala linemibhede emibili emibili emibili emibili emibili. Usofa omkhulu akuyona into edonsayo kodwa ungalala kahle nomuntu owengeziwe uma kudingeka. Indawo ine-wifi ne-cable yamahhala, i-smart blu ray player, i-air conditioning, amalineni, i-Keurig, i-microwave, ikhishi elinakho konke (amabhodwe, amapani, izitsha, njll.), kanye ne-porch yangasese evalekile emnyango.
4.97 out of 5 stars from 285 reviews
4.97 · 285 okushiwo abanye
I-Mount Morris isendaweni ephakathi kwezinye zezinto ezikhangayo ezinkulu zombuso ezihlanganisa i-Finger Lakes Region nemizila yewayini, i-Niagara Falls, i-Stony Brook State Park, idolobha lase-Rochester, ama-resort okushushuluza eqhweni kanye nemidlalo yasebusika. Sisemizuzwini engu-10 kuphela ukusuka e-SUNY Geneseo futhi singaphansi kwamamayela angu-2 ukusuka emnyango wasenyakatho ukuya e-Letchworth State Park emangalisayo, evotelwe i-America 's #1 State Park. I-Livingston County iyikhaya lezindawo eziningana zokwenza utshwala kanye nezindawo eziningi ezinhle zokudlela.
Njengababungazi bakho, siyatholakala ukuze sithole imininingwane ngokwesidingo.